Gianluigi Donnarumma oo berri jawaab siinaya AC Milan – Gool FM
(Monte Carlo) 12 Juunyo 2017 – Waxaa haatan soo baxaya war sheegaya in Gianluigi Donnarumma uu caawa la kulansan yahay wakiilkiisa Mino Raiola, iyagoo isla eegaya dalabka ay Milan ku doonayso in qandaraaskiisa la kordhiyo.
Qandaraaska qabtahan da’da yar ayaa dhacaya xagaaga xiga ee 2018, balse Rossoneri ayay ka go’an tahay inay qandaraaska u dheereyso.
Yeelkeede, wakiilkiisa ayaa caga jiid muujinayay taasoo ka caraysiisay Milan iyo taageerayaasheeda, taasoo keeni karta in 18-jirkan ay Milan kala waydaartaan.
Sida ku qoran MilanNews, Donnarumma iyo qoyskiisa ayaa ilaa maanta la shirsan wakiilka damaca badan ee Raiola oo ay ku arkayaan Monte Carlo, iyagoo qoys ahaan siin doona aragtida ay ka qabaan wiilkooda.
Kooxda Milan ayaa la sheegay inay laacibka u diyaarisay qandaraas uu sanadkii ku qaadanayo €4.7m, iyadoo uu goolwaluhu muujiyay inuu doonayo inuu lasii joogo naadigiisa. ”Guri wayn ayaan Milano ka raadsanayaa qof kastana waa ogyahay halka uu qalbigaygu jiro, naadigan ayaan ku xiran ahay” ayaa laga sheegay.
Si kastaba, Raiola ayaa la sheegay inuu wato shuruudo uu doonayo in qandaraaska lagu xiro taasoo ay si cad u diiddey kooxda AC Milan, waana caqabadda taagan.
RASMI: Goorma ayuu furmaya ama xirmayaa horyaalka Talyaanigu kal-ciyareedka 2017-18?